Ndị EFCC nwudere Soludo n’ebe o bi n’Abuja. Gịnị ka Soludo mere e ji achụ ya? Anyị nụrụ na ọ ga-abụrịrị ihe gbasara ọrụ ngo ahụ Soludo nyere otu ụlọ-ọrụ si mba Australia maka ibipute akwụkwọ ego polima. Soludo nyere ndị Australia ọrụ a mgbe ọ ka ji ọkwa dịka onye isi oche ụlọ ọba ego etiti.
Ndị EFCC jidekwere ihe ruru mmadụ 12 ndị ọzọ ọkwa ha gbagoro agbago na CBN, ndị a na-enyocha enyocha maka nrụrụ aka n’ihe gbasara inye ọrụ maka ibipute akwụkwọ ego polima, oge Soludo ka nọ n’ọkwa.
Anyị nụrụ na EFCC dị njikere ịgba Soludo na ndị ọzọ ahụ akwụkwọ n’ụlọ-ikpe.